काठमाडौं, १९ साउन । कुनैबेला विद्रोही माओवादी बालुवाटार धाउँथे, ‘संसदवादी दल’सँग वार्ता गर्न । बालुवाटारमा वार्ता गरेर केही हुन्न भन्ने सन्देशका लागि उनी भन्थे- बालुवा पेलेर तेल निस्कन्न । बालुवाटारमा बालुवा मात्रै छ, त्यसलाई पेलेर तेल निस्कन्न अर्थात् बालुवाटारमा वार्ता गरेर केही हुन्न ।
अहिले प्रचण्डको भूमिका फेरिएको छ । उनी ‘संसदवादी दल’कै एक नेतामा फेरिएका छन् । उनी अहिले सत्तारुढ शक्तिसँग वार्ता गर्न प्रतिपक्ष भएर होइन, सत्तापक्ष नै भएर जाने गरेका छन् । तर, खासमा उनी सत्तापक्षकै हुन् तर सत्तापक्षको पनि प्रतिपक्ष ।
३/४ दशकसम्म पार्टीभित्र अविछिन्न नेतृत्व गरेर अरुको ‘टाउको दुखाउने’ गरेका प्रचण्डको अहिले आफैं दुःख्न थालेको छ ।
सोमबार बालुवाटारबाट खुमलटार फर्किएका प्रचण्डको टाउको यति दुख्यो कि उनी भेटघाट रोकेर सुते । खुमलटार स्रोतका अनुसार केहीबेर ओलीसँग संगत र संघर्षको अनुभूति राखेपछि उनी असाध्यै टाउको दुख्यो भनेर ओछ्यानमा पल्टिएका हुन् ।
सोमबारको वार्तामा ओली आइतबारको भन्दा थप ‘रिजिड’ देखिए । हिजोको हार्दिकता आज बाँकी रहेन । ‘के वार्ता ? मैले के छाड्ने ? किन छाड्ने ? म केही छाड्दिनँ । छाड्ने भए तपाईंहरु छाड्नुस्,’ झण्डै झगडा गर्ने मुडमा देखिएका ओलीसँग प्रचण्डको एकछिन चर्काचर्की पर्‍यो ।
अब त झगडा नै हुन्छ कि केहो भन्ने भएपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिर निस्किएको उच्च राजनीतिक स्रोतले बताएको छ ।
बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा सहकर्मी बाबुराम भट्टराई ‘आफूले तीस वर्ष व्यहोरेको उहाँलाई अरु कसैले व्यहोरोस्’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराईले भोलिपल्टै माओवादी छाडिदिए ।
‘यत्तिको तनाव त जिन्दगीमा मलाई कसैले पनि दिएको थिएन’ भन्नुपर्ने अवस्था अहिले प्रचण्डलाई सिर्जना भएको भन्दै माओवादी समूहका एक नेताले मुखामुखा गरे । प्रचण्डले ओलीलाई अनुशासनहीन र अहंकारी व्यक्तिको रुपमा चित्रण गर्न थालेको माओवादी वृतमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
ओली पनि हतास
बोलीचालीमा जति हक्की देखिए पनि व्यवहारतः ओली भित्रभित्रै गल्न थालेको ओली समूहकै एक नेताले बताए । ‘उहाँ भएभरका सबै राजनीतिक नियुक्ति सक्न थाल्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘पाँचै वर्ष जान्छु भन्ने लागेको भए नियुक्तिमा यति साह्रो हतास हुनुपर्ने अवस्था थिएन ।’
बालुवाटार महाधिवेशन लगायतका तुरुप फ्याँकेर प्रचण्ड र माधव नेपालबीच दरार उत्पन्न गराउन चाहन्छ । अध्यक्ष पद र जबज विचारलाई लिएर दाहाल-नेपाल गुटमा फाटो आओस् भन्ने ओलीको चाहना छ । तर दाहाल-नेपाल नफुट्ने, बैठकको गोलचक्कर पनि चलिरहने र आफ्नो प्रख्याती पनि ओरालो लाइराख्ने अवस्था ओलीकै लागि बढी अप्ठेरो बनिरहेको छ ।
सोमबार प्रचण्डलाई रुखो बोलीले विदा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निजी निवास बालकोट हानिएका छन् । त्यहाँ पुगेर उनले ‘म डेढ वर्षपछि फर्कन्छु’ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि तेस्रोपटक बालकोट पुगेका ओलीले आफ्नो घर तथा करेसाबारीको निरीक्षण गरेका फर्केका थिए भने उनलाई केही नेताहरुले साथ दिएका थिए ।
गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुलाई उनले ‘बालुवाटारको बैठक परिणाममुखी बन्न नसकेको’ बताएका थिए ।